'Waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyay ee dayaxa ku dul socdo'' - BBC News Somali
Image caption 12 qof oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa booqday dayaxa
Howlgalkii ugu dambeeyey ee uu Mareykanka ku aado dhinaca dayaxa Apollo 17 ayaa ahaa 7 bisha Disembar 1972. Dadkii howlgalkan fulinayey ayaa saddex maalmood ku howlannaa xog aruuris iyo tijaabooyin.
Shiinaha ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu ku dago dayaxa sannadka 2030-ka, iyadoo ay tobonnaan sano ka soo wareegatay howlgalkii Apollo 17, ma jiro qof bini'aadan ah oo dib ugu laabtay dayaxa.
Ka dib dhimashadii ku timid Sabtidii Alan Bean oo horay u ahaa qabiir dhinaca dayaxa ah ayaa waxaa kaliye ee hadda soo haray afar nin oo kale oo horay u tagay dayaxa.
Qoraallo iyo wareysiyo ayay kaga hadleen khibraddooda.
Charles Duke: Wuxuu dhashay 3 Octoobar 1935
Image caption Charles Duke
Ninka sida wanaagsan ooga faallooda arrimaha taarikhda ee lagu magacaabo Charles Duke ayaa ka qeybqaatay xilligii uu socday howlgalka Apollo 11, markii uu Neil Armstrong noqday qofkii ugu horreeyey ee ku dul socda dayaxa.
Wuxuu ku dhashay Koonfurta Carolina, dad lagu qiyaasay 600 oo milyan ayaa telefishinka ka daawanayey markii uu hirgelinayey howlgalkaasi.
Sannado yar gudahood waxa uu hoggaamin doonaa howlgal asaga qaas u ah oo uu ku tagi doono dayaxa.
"Ma jeceshahay inaan dayax isla booqanno"ayuu ku yiri carruurtiisa mar uu madax u ahaa kooxda fulinaysay howlgalka Apollo 16 1972-dii.
Markii ay carruurtiisa ugu jawaabeen inay doonayaan inay ku wehliyaan aabahood howlgalka ayuu Mr Duke ballanqaaday inuu suurta gellin doona.
David Scott:Wuxuu dhashay 6 June, 1932
Image caption David Scott
David Scott ,waxa uu ku dhashay San Antonio, Texas,ayaa ku biiray Nasa 1963-dii.
Saddex mar ayuu booqday dayaxa, wuxuuna noqonayaa qofkii toddobaad ee dayaxa taga waana qofkii ugu dambeeyey ee u dhashay dalka Mareykanka ee u duulla bartamaha dhulka.
"Waan xasuusta …anoo gacanta ku taagaya meesha uu dhulka ka go'ayey " ayuu ku qoray buuggiisa.
Mr Scott ayaa sheegay in badanaa wax laga weydiiyo xilligii uu ku maqnaa booqashada dayaxa ayna wax ka badeshay noloshiisa.
"Kaliye qof gabyaa ah ama farshaxaniiste ah ayaa garan kara quruxda dayaxa" ayuu yiri.
Harrison Schmitt: Wuxuu dhashay 3 July, 1935
Image caption Harrison Schmitt
Harrison Schmitt oo ku dhashay Santa Rita, New Mexico ayaa u soo barbaaray si ka duwan dadka da'diisa ah.
Waxaa lagu howlgeliyey bishii August 1971-kii inuu hirgeliyo howlgalkii ugu dambeeyey Apollo 17, Mr Schmitt ayaa dayaxa u safray bishii Disembar 1972-dii.
Kooxdan ayaa sawir cajiib iska qaaday oo noqday sawirkii loogu aqoonsiga badnaa taariikhda.
Wareysi ay Nasa bixisay 2000, ayuu Mr Schmitt sheegay in iftiinka dayaxa uu ahaa mid cajiib ah.
"Waxan fursad u helay inaan arko muqaalkan cajiibka ah" ayuu yiri
Mr Schmitt oo ka hadlay wax yaabihii ugu adkaa uguna dhibka badnaa ayaa sheegay inay ahaayeen mugdiga ka jiray hawada sare.
"Waxaan u maleynaya dhibaatada ugu weyn inay tahay in sawiradda ay ahaayeen kuwa mugdi ah ama madow ah. kuwa kaliye ee muuqdana ay tusinayeen calaamado buluug ah, marka ma arkaysid wax isbadel ah maxaa yeelay waxad filaysaa inuu cirka yahay madow".
Edwin 'Buzz' Aldrin: wuxuu dhashay 20 Janaayo.
Image caption Buzz Aldrin
Wuxuu ku dhashay New Jersey , Buzz Aldrin ayaa ka mid noqday Nasa 1963-dii wuxuuna qeyb ka ahaa dadkii fuliyey howlgalkii Apollo 11 1969-kii ,taasi oo ahayd safarkii ugu horreeyey ee ay u diraan dayaxa.
Xilligii uu howlgalkan socday waxaa ku wehliyey Neil Armstrong, oo qaaday tallaabooyinkii ugu horreeyey ee dhinaca dayaxa ah, daqiiqado ka dib waxaa ku soo biiray Mr Aldrin. Waxayna ku qaadatay muddo 21 saacadood iyo 36 daqiiqo ah.
Sawirrada uu qaaday Mr Aldrin, mar uu ku dul socday dayaxa ayaa noqday sawirro caan ka ah dunida.
Wuxuu sheegay in xilligii uu ku jiray howlgalkaasi ay u hayd guul weyn.
Mr Aldrin ayaa sidoo kale sheegay inay ahayd fursaddii ugu cajiibka badnayd ee soo marta uuna helay khibrad dhinaca dayaxa ah.
Tan iyo safarkii uu ku tagay dayaxa, Mr Aldrin wuxuu si joogta ah u soo jeedinayey :